Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art 3.6.18 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.6.18 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art
Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
640 ကျော်ကလှပသောပျဉ်ပြား, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, သို့မဟုတ် filters Montage နှင့်အတူသင်၏ဓါတ်ပုံများ Enhance! ဓာတ်ပုံ Lab မှ PRO တစ်ခု, လွယ်ကူသောမြန်ဆန်ပျော်စရာဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုရယ်စရာလုပ် Ninja ကိုတည်းဖြတ်ဓာတ်ပုံနှင့်မည်သည့်ပုံတူလှပသောဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို process မှရသောပုံရိပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့, သုံးစွဲဖို့တစ် filter ကို, ဘောင်သို့မဟုတ် Montage ကောက်များနှင့်ကန့်! ဓာတ်ပုံ Lab မှ PRO အပေါငျးတို့သဂုဏ်အသရေအနားယူရ, သင်ပြန်ထိုင်ကြကုန်အံ့ဖို့အားလုံးကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုပြုလိမ့်မည်။
ဓာတ်ပုံ Lab မှ PRO နီးပါးမည်သည့်ရုပ်ပုံပြင်ဆင်ရန်တစ်ခုခုရှိပါတယ်။ ဒါဟာရှေးခယျြဖို့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ၏ရသောသငျသညျအထိဖွင့်:
- ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ Montage တစ်စပျစ်သီးကိုပို့စကတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်မွေးနေ့ကိတ်မုန့်ပေါ်တွင်သင်၏ပုံတူရဖို့
- စိတ်ကူးရှုခင်းများ, lifelike မြင်ကွင်းများသို့မဟုတ်ချစ်စရာကာတွန်းဇာတ်ကောင်နှင့်အတူပုံဝန်းရံဖို့ဓာတ်ပုံကိုဘောင်
- Iron Man, Darth Vader သို့မဟုတ် Mona Lisa ကိုဖြစ်လာမှအပေါက်ဆိုးကျိုးများအတွက်မျက်နှာ
- အတူတကွများစွာနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုရာပေါင်းများစွာတွေချုပ်ဖို့ဓာတ်ပုံကို Collage
- photo filters တစ်ဦးပျော်ရွှင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးလွမ်းဆွတ်စိတ်ဓါတ်များကိုထည့်သွင်းဖို့
- မဂ္ဂဇင်းကိုသင် Playboy သို့မဟုတ် Vogue ၏ icon တစ်ခုလုပ်သို့မဟုတ် GQ ၏အဖုံးပေါ်တွင်သင်ထားမှဖုံးလွှမ်း
- ထိုသို့သော headwear, အနုပညာရှင် Collage, မိကျောင်းနှင့်ပိုပြီးကဲ့သို့သောအခြားဓါတ်ပုံကိုသက်ရောက်မှု!
အဆိုပါ PRO ဗားရှင်းသီးသန့်ဖြစ်သောသင်၏ဓါတ်ပုံများကို process မှ tools အချို့တို့ပါဝင်သည်:
- သင့်ဓါတ်ပုံတွေကိုတစ်ဦးစပျစ်သီးကိုကဒ်သို့မဟုတ် retro ရုပ်ရှင်တူအောင်လုပ်ဖို့ stylized ဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ
- အနုပညာ filter များကြော့ရေးဆွဲသို့မဟုတ်ပန်းချီကားများသို့သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုဖွင့်ဖို့
- ခြင်္သေ့တစ်ကောင်သို့မဟုတ် koala ရန်သင့်မကျြနှာကိုပေးစေခြင်းငှါလူ့-to-တိရိစ္ဆာန် Montage
- တစ်ဦး dreamlike ရှုခင်းသို့သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံပတျဝနျးကငျြကိုပြောင်းလဲနောက်ခံဆိုးကျိုးများ။
အဆိုပါ PRO ဗားရှင်းလည်းကြော်ငြာများနှင့်ရေမှတ်များ၏အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအများကြီးပိုမြန်သင်၏ဓါတ်ပုံများလုပ်ငန်းများ၌။
သင်ဓာတ်ပုံ Lab မှဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့်တကွပုံတစ်ပုံကို process ပြီးနောက်သင် Facebook, Twitter Instagram ကိုသငျတို့ကိုချစ်အခြားလူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်ရလဒ်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဒါမှမဟုတ်သင်အတိုလင့်များရပုဂ္ဂိုလ်ရေးမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များအဖြစ်သူတို့ကိုပေးပို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာရရှိလာတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို upload တင်လို့ရပါတယ်။
နယူးဓာတ်ပုံကိုဘောင်နှင့်ဓာတ်ပုံ filter များတစ်ဦးချင်းစီ update ကိုအတူထည့်သွင်းထားပါသည်။ သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဓာတ်ပုံကို Montage သို့မဟုတ် collage မတှေ့လြှငျ, အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နှငျ့သငျဓာတ်ပုံ Lab မှ PRO ရဲ့နောက်ဗားရှင်းမြင်ရပေလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများထံမှကြားနာကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ Lab က Google တွင်အကောင်းဆုံးကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာ Play Pro စေရန်ရည်ရွယ်!
ဓာတ်ပုံ Lab မှ PRO အစဉ်အမြဲသင်၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်! *
* ဓာတ်ပုံ Lab မှ PRO သို့မဟုတ်သင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ပါစေခြင်းငှါသင်တို့မူကားလုံးဝကြောင့်ကိုချစ်တာပေါ့!
Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art အား အခ်က္ျပပါ
rahullah စတိုး 128.84k 38M
Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.6.18
ထုတ်လုပ်သူ VicMan LLC
Release date: 2019-09-13 19:20:37
လက်မှတ် SHA1: 04:0C:78:F8:8D:02:65:DF:B1:2A:10:D2:9B:80:A3:14:2B:9A:39:25
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andrey Ilyin
အဖွဲ့အစည်း (O): VicMan
Photo Lab PRO Picture Editor: effects, blur & art APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ